Home Wararka Dabageed: “Farmaajo iyo aniga waa nala heshiisiiyay.. isku-weel aana wax ku cunaynaa”
Dabageed: “Farmaajo iyo aniga waa nala heshiisiiyay.. isku-weel aana wax ku cunaynaa”
Asbuucii la soo dhaafay waxaa dib u heshiiin laga dhex waday Madaxweyne ku xigeenka HirShabeelle, Yususf Dabageed iyo MW Farmaajo. Labada nin ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf ka dib doorashadii Aqalka Sare ee HirShabeelle.
Kulankaan oo qaatay mudo laba cesho ah ayaa waxa markii danbe ka soo qaybgalay Fahad Yasin iyo Cali Guudlaawe. Doodo saacado qaatay ka dib waxaa uu Farmaajo soo jeediyay in howsha Xildhibanada ka soo baxaya HiShabeelle ay si wada jira u maamulaan sadax nin ee kala ah: Guudlaawe, Fahad iyo Yusuf Dabageed.
Qododaba la isla gartay aayaa waxaa ka mid ahaa in Xidihibanada la soo saari doono ay liiskiisa soo gudbin doonaan Farmaajo iyo Fahad, halka Cali Guudlaawe iyo Yusuf Dabageed la sii doono 14 xildhibaan oo iyaga aan lagu faragalin doonin oo ay si toosa u soo xulkan doonaan.
Kulanka ka dib ayaa Yusuf Dabageed waxaa la siiyay lacag lagu sheegay sooryo iyo raali galin. MOL ma helin cadada lacagta la siiyay Yusuf Dababeed, laakiin waxa ay ahay lacag uu aad ugu faraxsanaa qaadashadeeda.
Kulanka ka dib ayaa Yusuf Dabageed oo ku soo noqday hoyga uu ka degan yahay magaaalada Muqdisho waxa uu saaxibadiisa u sheegay in isaga iyo Farmaajo heshiiyeen meenlna wax isla dhigteen.
“ Inakstoo uu isku dayay in uu aniga in hadadao hadana ugu danbeyentii, Farmaajo iyo aniga waa nala heshiisiiyay, waxaaana isla garanay in aan isku-weel wax ku cuno hada iyo wixi ka danbeeya”. Ayuu yiri Yusuf Dabageed.